दुइ दिनपछि रुसले बनाएको खोप दर्ता हुँदै, यस खोपको वास्तविकता के हो ? (सम्पुर्ण जानकारी) - सिम्रिक खबर
दुइ दिनपछि रुसले बनाएको खोप दर्ता हुँदै, यस खोपको वास्तविकता के हो ? (सम्पुर्ण जानकारी)
रूसी रक्षा मन्त्रालय र ग्यामेलिया अनुसन्धान संस्थान द्वारा बनाईएको खोप १२ अगस्तमा दर्ता हुनेछ। यो दर्ता गरिएको विश्वमा यस्तो पहिलो कोभिड खोप हो।
रुसले विश्वको पहिलो कोरोना भाइरस खोप ल्याउन तयारी गरिसकेको छ। त्यहाँ, यो खोप दर्ता प्रक्रिया १२ अगस्टसम्ममा पूर्ण गर्न सकिन्छ। रूसी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एडेनोभाइरसको आधारमा यो खोप अर्को महिनादेखि सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन तयार छ।
यस खोपको एक खुराक कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता प्राप्त गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ। यद्यपि, विश्वभरका विज्ञहरूले रूसी खोपलाई चाँडो हुँदैछ भन्नेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। यद्यपि हामी यस खोप सम्बन्धी केही जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौ ।
अलेक्ज्याण्डरका अनुसार आफ्नै प्रतिलिपि बनाउन सक्ने क्षमता भएका कण र वस्तुहरू जीवितै मानिन्छन्। तर भ्याक्सिनमा प्रयोग भएका कम्पोनेन्टहरू उनीहरूको प्रतिलिपि बनाउन सक्षम हुँदैनन्। यो खोपले जनताको प्रतिरोध क्षमता बढाउन काम गर्दछ।
यदि कुनै व्यक्तिमा खोप लागू गरे पछि कोरोना भाइरसले सतायो भने कोरोना भाइरस त्यो व्यक्तिको प्रतिरोधात्मक प्रणालीबाट उन्मूलन गर्न सकिन्छ।
अब खोपको स्थिति कस्तो छ ?
हाल, यो खोपको लागि क्लिनिकल परीक्षण डेटा र अन्य कागजातहरूको विज्ञ समीक्षा भइरहेको छ। रेजिष्ट्रेसनको निर्णय यसको परिणाममा निर्भर गर्दछ। साथै, खोपको सुरुवाती परिक्षण भइरहेको छ।
यस खोपका कुनै साइड इफेक्ट छन ?
गमाल्या इन्स्टिच्यूटका प्रमुखका अनुसार एक व्यक्तिलाई खोप लगाएपछि सामान्यतया हल्का ज्वरो, थकान, वा शरीर बिच्छेद भएको महसुस हुन्छ। यस खोप लगाइसकेपछि , हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै छिटो हुन्छ। खोपको खुराकले स्वाभाविक रूपमा हल्का ज्वरो निम्त्याउन सक्छ तर यो समस्या होइन। प्यारासिटामोल ट्याब्लेटले ज्वरोलाई कम गर्न सक्छ।
पहिलो डोज कसले पाउने छ ?
रिपोर्टका अनुसार गमालय इन्स्टिच्यूटका प्रमुख अलेक्ज्याण्डर जिन्टजबर्ग र खोप विकासमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफूलाई खोपको खुराक दिएका छन्। रसियाका स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोले भनेका छन् कि स्वास्थ्यकर्मीलाई यो खोप यस महिनादेखि सुरु हुन सक्छ। रसियामा पहिलो लाइन स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोना खोप लगाईनेछ। यो पनी वरिष्ठ नागरिकलाई खोप दिइनेछ।
यो खोप कहिले बजारमा आउँछ ?
रसियाको स्थानिय समाचार एजेन्सीका अनुसार हाल यस खोपको सीमित खुराक तयार गरिएको छ। एक पटक नियामक स्वीकृति प्राप्त भएपछि यस खोपको औद्योगिक उत्पादन सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुन सक्छ। रसियाले भनेको छ कि त्यसले अक्टूबरदेखि देशव्यापी खोप दिन सुरु गर्न सक्छ।
संसारमा सबैभन्दा पहिले यो खोप कसले पाउनेछ ?
रसियाले विश्वभर खोप वितरण गर्ने कुरा गरिसकेको छ, तर धेरै देशहरू यसबारे अझै हिचकिचाइरहेका छन्। पश्चिमी देशहरूलगायत विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ कि पर्याप्त डाटाबिना खोपहरू आपूर्ति गर्नु उचित हुँदैन।
बेलायतले स्पष्ट रूपले भनेको छ कि यसले आफ्ना नागरिकहरुलाई रूसी खोप प्रदान गर्दैर्ने छैन । यस्तो अवस्थामा, खोप अन्य देशहरूमा प्रारम्भिक चरणमा पठाउन नसकिने हुन सक्छ। रसियाको आम जनतामा भ्याक्सिनको प्रभाव देखेपछि अन्य देशहरूले यस बारे निर्णय लिन सक्दछन्।
यस खोपको कति खर्च हुन्छ ?
रूसी एजेन्सी टिएएसएसका अनुसार, यो खोप रूसमा निशुल्क उपलब्ध हुनेछ। यसमा भएको खर्च देशको बजेटबाट पूरा हुनेछ। बाँकी देशहरूको मूल्य अहिलेसम्म खुलाइएको छैन।